निदाएको बेला एेठन हुन्छ के याे बिमारी हाे ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
निदाएको बेला एेठन हुन्छ के याे बिमारी हाे ? तपाईं निद्रामा हुनुहुन्छ र तपाईंलाइ सासै फेर्न गाह्रो हुनेगरी कसैले दबाइरहेको छ ? कतै तपाईलाई यस्तो त भएको छैन ?
निदाएको बेला एेठन हुन्छ
विश्वकप– २०१८ को सेमिफाइनल खेल आजदेखि शुरु,
जीवनशैलीनिदाएको बेला एेठन हुन्छ के याे बिमारी हाे ?